၇ နှစ်အရွယ်အိုင်းရစ်ရှ်ကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုခံနေရသည်။ Dr Fergal Rooney (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
Sylvia Pownall (byမူရင်းဆောင်းပါးလင့်ခ်)
အိုင်ယာလန်ခုနစ်အွန်လိုင်းက x-rated ပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့ခံရသကဲ့သို့ကလေးငယ်များနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲကပ်ရောဂါများ၏ချုပ်ကိုင်ထား၌တည်ရှိ၏။ ကနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲမပါဘဲစုံတွဲများမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်အသက်တာကိုသူရဲဖြစ်ပါတယ် - တစ်ဦးချင်း porn ဗြိတိန်, ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်နောက်ကွယ်မှအသုံးပြုရန်ယခုကြှနျုပျတို့ကမ်ဘာပျေါတှငျစတုတ္ထအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။
ကုသနှင့်ထောက်ခံမှုအုပ်စုများကသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းများအတွက်အကူအညီရှာကြံနံပါတ်များအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းတစ်ဦးကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးမြင့်တက်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲအမည်မသိအိုင်ယာလန်များအတွက်တစ်ဦးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်: "porn အပါအဝင်ဆိုက်ဘာလိင်၏အသုံးပြုမှုအတွက်ကြီးမားများပြားလာရှိပုံရသည်။
"ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး 25 ၏အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းသုံးပြီးစတင်သူကို 10 ၏အသက်အရွယ်မှာအကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်တစ်စုံတစ်ဦးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ "
သူက laptop, tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများပေါ်ပေါက်ရေးလျှို့ဝှက်အတွင်းကြည့်ရှုရန်လူများအတွက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုပြီးလက်လှမ်းလုပ်သောကဆိုသည်။
အဆိုပါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြောသည်: "ဒီတိုးကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဘဝတွေကို့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရန်လာသည့်အခါလူများစွာရော့ခ်အောက်ခြေမှာဖြစ်ကြသည်။ ကိစ္စအများစုထဲမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။
သူတို့ဒါကြောင့်အနိမ့် feeling ကြောင့် "သေကြောင်းကြံစည်မှုကိုမကြာခဏလာမယ့်ခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"ဒီပြဿနာကလှည့်ပတ်ခြင်းမရှိစည်းမျဉ်းရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စွဲအစာကျွေးနိုင်သူတစ်ဦးလောင်းကစားသမားနဲ့တူပါက porn နှင့်အတူတူညီင်ကရယူသုံးရန်မအတားအဆီးတွေရှိပုံပါပဲ။ "
Psychotherapist နှင့်စာရေးဆရာ Trish Murphy ကသူမဟာသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းများအတွက်အကူအညီရှာကြံနံပါတ်များအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်မမြင်စဖူးဟုဆိုသည်။
သူမသည် said: "ဒါဟာမျှမျှတတပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကတိုးချဲ့နှင့်အဲဒါကို၏ရလဒ်အဖြစ်အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးသူကသူတို့ရဲ့ဘဝတစျခုလုံး, ကျော်ကြာကြောင်းရွံရှာခံစားရသူက porn အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့မတတ်နိုင်နေသောလူများ, အများကြီးကိုကြည့်ပါ။ "
သူမသည်အများဆုံးသုံးစွဲသူများက porn နှင့်အတူကျန်းမာကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ဆိုပါတယ် - ဒါပေမဲ့သူတို့ပိုပိုပြီးစှဲရအဖြစ်အချို့သောအဘို့အဘယ်သို့သိချင်စိတ်အဖြစ်အထဲကစတင်သည်ပရိယာယ်အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲနှစ်ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
"လူတိုင်းပြဿနာတွေရှိပါတယ်မဟုတ်," Trish ကဆိုသည်။ "လူအများစုဟာကထွက်ကြီးထွားပေမယ့်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးအရစိုးရိမ်ပူပန်နေသောလူမျိုးညစ်ညမ်းကြောင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင့်တိုက်ပိတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွက်စို့ရပုံရသည်။
"ပထမတော့သူကအလုံအလောက်အန္တရာယ်ကင်းပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကတိုက်ရိုက်လွှ webcam သို့ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယခေါ်ထုတ်, အရာလုပ်နိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတက်ဆက်ဆံရေးနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်အဘယ်သို့အပေါ်ချွတ်ရတဲ့နေအံ့ဩသောကွောငျ့ "ဒါဟာသင်သည်ရွံရှာပါတယ်ရှိရာမှောင်မိုက်ဧရိယာသို့ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှလိမ့်မည်ဟုကြောက်လန့်ပါပဲ။
"တချို့လူတွေကပိုကြီးတဲ့ hit ရဖို့နောက်ထပ်, နောက်ထပ်သွားစောင့်ရှောက်လော့။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်နောက်မှသူတို့ကို disgusts ကြောင့်ပစ္စည်းပစ္စယတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ရှာပါ။
"ငါသည် porn ကိုကြည့်ရှစ်နာရီတစ်ရက်ဖြုန်းပြီးရလဒ်အဖြစ်အလွန်လူမှုရေးအရအထီးကျန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူကလူတွေကိုငါသိ၏။
Trish sexting ၏အန်တရာယျသတိပေးနှင့်လူငယ်များသူတို့ကအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိကြ၏မတိုင်မီက x-rated ပစ္စည်းထိတွေ့ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ဒါဟာအလွန်အန္တရာယ်ပစ္စည်းပစ္စယရဲ့ "ဒါပေမယ့်နေရာတိုင်းရဲ့ငါတို့သည်မသိရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်: သူမကပြောသည်။ မိဘများလိင်နှင့်ညစ်ညမ်း၏မြေတပြင်လုံးပြဿနာန်းကျင်သူတို့သားသမီးနဲ့စကားစတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
တစ်ဦးကအထူးကုစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု porn စွဲနှင့်အစွန်းရောက်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက် addressing ကိုရည်ရွယ်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ် Dublin ဘုရားသခငျ့ဆေးရုံ၏ St John မှာကို set up ခဲ့သည်။
ဖုံးကွယ်ထားသည့်ပြissuesနာများမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ porn နှင့် paraphilic အပြုအမူများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း - တစ်စုံတစ် ဦး သည်အရာဝတ္ထု၊ တိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်နာကျင်မှုများကိုပါပါဝင်သောအစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်နှိုးဆွသောအခါ၊
ဒေါက်တာ Fergal ရွန်နီ, service-ထုံးစံပူးတွဲသူစိတ်ပညာရှင်က "ကျနော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn အသုံးပြုမှုအခက်အခဲရှိလူများတစ်ဦးတိုးပွားလာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"များသောအားဖြင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ disrupts မိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လိင်မချိတ်ဆက်နိုငျသောအတိုင်းအတာအထိ porn ကို အသုံးပြု. ရသည်။
"Porn ညင်သာပျော့ပျောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်အဆုံးကြည့်ရှု porn အပေါ်နာရီထိုင်လျက်ခံရဖို့အတှကျဒါဟာသာယာသောအရာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့ဇာတ်စင်မှာပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်မလှူဖြစ်လာသည်။
"ဒီကပိုကလူသူတို့ကြုံတွေ့ရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုလွန်ကဲအမျိုးအစားများကို porn ကိုသုံးပါနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိင် skews ။
"ဒီကိစ္စများ intimacy မှဦးဆောင်နှင့်ကျွန်တော် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိသည်သောလူပျို၏ကောင်းတစ်ဦးအချိုးအစားကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ "
Pornhub အဆိုအရပျမ်းမျှအိုငျးရစျအသုံးပြုသူ porn ကြည့်ရှုအလည်အပတ်ခရီးနှုန်းကိုးမိနစ်နှင့် 48 စက္ကန့်သုံးစွဲသည်။ Ray ဂျေးနှင့်အတူ Kim Kardashian ရဲ့လိင်တိပ်အရှိဆုံး 150million အမြင်များကိုတက်ယူပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကြည့်ရှုအားပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ site ကိုမှအသုံးအများဆုံးရှာဖွေရေးအိုင်ယာလန်မှာအသုံးပြုတဲ့စကားများ MILF ပါဝင်သည်, mammy, လယ်ထွန်စက်, လိင်တူချစ်သူ, ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်ဧည့်သည်များ၏လေးပုံတစ်ပုံအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။
SLAA အိုင်ယာလန်အစည်းအဝေးများ၏အသေးစိတျအဘို့ www.slaaireland.org တွေ့မြင်, ဒါမှမဟုတ် 01 2771662 ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် www.sjog.ie. သွားရောက်ကြည့်ရှု